सपनामा महिलालाई देख्नुहुन्छ ? ज्योतिष शास्त्र यसो भन्छ
स्थानीय निर्वाचन - २०७९
सम्पादकीय आलेख अन्तर्वार्ता
बैंक/शेयर उपभोक्ता अर्थ विविध
साहित्य संगीत सिनेमा
खाेज फिचर टिप्पणी
फिचर भिडियो राजनीति
काठमाडाैं | असार ४, २०७९
ज्योतिष शास्त्रका अनुसार सपनाको वास्तविक जीवनसँग सम्बन्ध हुन्छ । तपाईलाई सपनाले कहिले केही भन्न खोजिरहेको हुन्छ । तर, तपाईले त्यसको मतलव बुझ्न सक्नु हुन्न ।
यदी तपाईले सपनामा महिलालाई विभिन्न रुपमा देख्नुभयो भने के हुन्छ र त्यसको अर्थ के लाग्छ त ?
नाचिरहेको युवती देखेमाः
नाचिरहेको युवती सपनामा देखिएमा तपाईंको आफ्नी प्रेमिकासँग सम्बन्ध टुट्ने वाला छ ।
दुलही रुपी महिलाः
जब कोही मानिसले सपनामा सजिएकी दुलही देख्छ भने त्यस्ता मानिसले अनेकौं सुख प्राप्त गर्ने संकेत गर्दछ । सपनामा धेरै परीहरु एकसाथ देख्दा अचानक धनसम्पत्ति प्राप्त गर्ने संकेत हो ।
सुनौलो कपाल भएकी महिलाः
कोही व्यक्तिले सपनामा सुनौलो कपाल भएको महिला देख्छ भने उसको विवाह कुनै धनी परिवारको महिलासँग हुनेछ ।
बुर्का लगाएकी महिलाः
बुर्का लगाएकी महिला सपनामा आउँछिन् भने कुनै साथी, आफन्त र बिजनेस पार्टनरबाट धोका मिल्ने संकेत गर्छ ।
स्त्रीलाई चुम्बन गरेको सपना देखेः
कसैले यदि सपनामा स्त्रीलाई चुम्बन र सम्बन्ध स्थापित गरेको देख्छ भने अचानक धन प्राप्त हुने संकेत हो ।
स्त्रीले अंगालो हालेको देख्नुः
सपनामा जसलाई सुन्दर महिलाले अंगालो हाल्छिन् त्यस्ता व्यक्तिहरु धनी हुनेछन् । जसले सपनामा आफ्नी प्रेमिकालाई छोड्छ उसलाई धन–सम्पत्ति प्राप्त गर्दछ ।
श्रीमतीसँग घुम्न गएको देख्दाः
कोही व्यक्तिले यदि श्रीमतीसँग कतै घुम्न गएको देख्छ भने उनीहरुको दाम्पत्य जीवन सुखसँग व्यतित हुने संकेत हो ।
झुम्का लगाएकी महिला देखेमाः
सपनामा कुनै युवतीले झुम्का लगाएको देखेमा कुनै शुभ समाचार सुन्न पाउने संकेत हो ।
श्रीमतीसँग टाढा भएको देखेमाः
कोही व्यक्तिले आफ्नी श्रीमतीसँग टाढा भएको सपना देखेमा त्यस्ता व्यक्तिहरु चाँडै नै कुनै रोगको शिकार हुने संकेत हो ।
सुँगुरमा बसेकी महिला देखेमाः
जसले सपनामा सुँगुरमा बसेकी महिला आफूतर्फ आइरहेको देख्छ भने त्यो व्यक्तिको मृत्यु हुने सम्भावना रहन्छ ।
रातो पहिरनकी महिलाले अंगालो हालेमाः
जब कोही व्यक्तिले सपनामा रातो रंगको कपडा लगाएर अंगालो हाली माला पहिराउँछ भने उक्त व्यक्तिको मृत्यु चाँडै नै हुनसक्छ ।
कोही यौनकर्मीले तानिरहेको देखेमाः
यदि सपनामा कुनै यौनकर्मीले तानिरहेकी देख्नुहुन्छ भने उसले आफ्नो जीवनमा अनेक कष्ट भोग्नुपर्ने हुनसक्छ ।
बिरालो सुतिरहेको देखेमाः
यदि कोही अविवाहित युवतीले कुर्सीमा बिरालो सुतिरहेकी देख्छिन् भने उनको विवाह कुनै धनी युवकसँग हुनेछ ।
नरिवलको तेल प्रयोग गर्नुको छन् यस्ता फाइदा
असार १८, २०७९
ताइवानको स्वतन्त्रताको कुरा झिकेमा युद्ध हुने चीनको चेतावनी
माघ १२, २०७७
शान्ति अनुभूत गर्न चाहनु हुन्छ ? विपश्यना जानुस्
असार १६, २०७९
आफ्नो मनलाई विकारमुक्त बनाई सुख र शान्ति अनुभूत गर्न चाहनेहरु हिजोआज विपश्यना ध्यानप्रति आकर्षित भएको पाइन्छ । शील, समाधि र प्रज्ञालाई बुझ्न र आफ्ना मनभित्रका राग, द्वेष र मोह हटाएर चित्त निर्मल पार्न विपश्यना ध्या...
ब्राह्मणका लागि किन वर्जित छ लसुन-प्याज
असार ४, २०७९
काठमाडौं -केही मानिस धार्मिक मान्यताका कारण लसुन र प्याज खाँदैनन् । विशेषगरी ब्राह्मणहरू लसुन प्याज खाँदैनन् । यसरी नखानुका वैज्ञानिक र धार्मिक कारण छन् । आयुर्वेदका अनुसार खाद्य पदार्थलाई तीनवटा श्रेणीमा बाँड...
के तपाइँले बाटोमा भेटेको पैसा टिप्नु भएको छ ? जान्नुहोस् यसको धार्मिक परिणाम
असार ७, २०७९
तपाइँले बाटोमा हिडिरहेको बेलामा पैसा भेट्नु भएको छ ? टिप्नु पनि भएको होला ? यस्तो पैसा भेट्नुलाई कतिले शुभ र कतिपयले अशुभको रुपमा लिने गरेका छन् । भेटिएको पैसालाई कसैले व्यक्तिगत प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने ...
हिन्दु संस्कारमा सहगोत्रीसँग किन गर्नु हुँदैन विवाह ?
असार १, २०७९
काठमाडौं, — हिन्दू धर्मले सहगोत्रीका बीच विवाह गर्न नहुने विधान गरेको छ । गोत्र भनेको वंश र कुल हो । प्रत्येक नयाँ पुस्तालाई गोत्रले जोड्ने काम गर्छ । जस्तो, कसैको भारद्वाज गोत्र छ भने त्यो व्यक्ति भरद्वा...
शास्त्रका कुरा-यी ५ अप्सराका बारेमा जान्नुस्
शास्त्रमा देवराज इन्द्रदेवका अप्सराहरूको विशेष उल्लेख पाइन्छन् । जबजब कोही ऋषि या दानव ध्यानमा मग्न हुन्छन् तब इन्द्रले तपस्या भंग गर्न अप्सरा पठाउने गरेको उल्लेख पाइन्छ । इन्द्रको सभामा थुप्रै अप्सरा हुने गर्थे । यी ५...
घरमा कहिल्यै नराख्नुहोस् यस्ता वस्तु, वास्तुशास्त्रले यसो भन्छ
असार १४, २०७९
वास्तुशास्त्र अनुसार घरमा कुन ठाउँमा के कुरा राख्ने नियमको पालना गर्दा सुखसमृद्धि प्राप्त हुन्छ । वास्तु पालन नगर्दा भने स्वास्थ्य र धनहानिका अलावा अन्य धेरै समस्याबाट ग्रस्त भइन्छ । खराब भएको र टुटेफुटेको सामान घ...
संस्मरण : सडकका खाल्डा पुरिएलान् कि भनेको उल्टै मविरुद्ध उजुरी पो परेछ !
असार १९, २०७९
गएको जेठ महिनायता (यो आलेख लेख्दासम्म) मैले ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर २२ स्थित चुनिखेल र भैँसेपाटीको उकालोमा राज्यले थापेको धरापमा परेर लडेका चारजना स्कूटी चालक (आमा–बच्चासहित)लाई आफ्नो गाडीमा र...
'यसरी कम गर्न सकिन्छ मुलुकमा आर्थिक संकटको जोखिम'
विदेशी मुद्रा सञ्चिति नै अर्थतन्त्रको अवस्था देखाउने एउटा चित्र हो । सामान्यतया धनी देशहरूमा ३ महिनाका लागि विदेशी मुद्राको सञ्चिति भए पनि पुग्छ । तर, नेपालजस्तो गरीब देशका लागि भने कम्तिमा ६ महिनाका लागि मौज्दा...
आर्थिक संकटका भविष्यवेत्ता महोदयहरू– यसबाट पार पाउने भिजन पनि छ कि ?
हेलो मिस्टर रिकार्डो, तिम्रो प्रशिद्ध पुस्तक प्रिन्सिपल अफ पोलिटिकल इकोनोमी एन्ड ट्याक्सेसन सन् १८१७ मा सार्वजनिक भयो । त्यसयता पूँजीवादले आफ्ना २ सय वर्ष गुजारिसक्यो, तर सामाजिक अन्तरविरोधको समाधान दिन सकेन । मि...
इन्धनमा भएको अविवेकी मूल्यवृद्धि फिर्ता गर सरकार
सच्याउनै पर्ने 'विकासविरोधी' फैसला
न्यून आय भएका जनतालाई मूल्यवृद्धिको विकल्प देऊ सरकार
झलनाथको सनसनीपूर्ण खुलासा: प्रधानमन्त्रीकोमा ‘गोप्य डिभाइस’ राखेर सूचना लीक गरिने रहेछ [अन्तर्वार्ता]
विमल गौतम / सुशील पन्त / विन्देश दहाल
उपेन्द्रजीको भरोसा छैन, पार्टी फुट्न लागेकाले एकताको कुरा गर्नुभएको होला– राजेन्द्र महतो [अन्तर्वार्ता]
'वाम तालमेलको ढोका खुलै, तर पहिले गैरवामपन्थीसँगको सहकार्य त्याग्नुपर्‍यो नि !'
मकवानपुरमा जन्ती बोकेको ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा एकको मृत्यु, २६ घाइते
४ घण्टा अघि
बालबालिकालाई लगाइने २३ लाख मात्रा खोप आयो
१७ डीआईजीको पदस्थापन, को कहाँ (नामावली)
माओवादीको केन्द्रीय समितिमा लार्क्याल लामादेखि प्रचण्डका ज्वाइँसम्म (नामावलीसहित)
कांग्रेस पदाधिकारी बैठक मङ्गलबार बस्ने
५ घण्टा अघि
नेटो विस्तारमा अमेरिकाको भित्री स्वार्थ, थप दुई छिमेकी सदस्य बन्दा किन तर्सिएन रुस ?
आरजु देउवा र लेखराज भट्टलाई कैलालीमा चुनाव जित्न कति सहज ? यस्तो छ हिसाबकिताब
तुलसीको पातका यी फाइदाहरू थाहा पाउँदा छक्क पर्नुहुनेछ
उच्च अदालत पाटनमा शाखा अधिकृत र उपसचिवबीच कुटाकुट
लोकान्तर सञ्चार प्रा.लि., कुपण्डोल रोड, ललितपुर
फोन नम्बर: ९७७–०१–५०१०६०१, ५०१०६२०, ५०१०५३९
विज्ञापनका लागि सम्पर्क: विष्णुराम घिमिरे (9851074887)
सूचना विभाग दर्ता नं.:१९६/२०७३-०७४
लोकान्तर डट्कममा प्रकाशित सामग्री विना अनुमति साभार गर्न पाइने छैन । अनधिकृत रूपमा सामग्री प्रयोग गरेको पाइएमा प्रचलित कानूनबमोजिम कारवाही हुनेछ ।
Copyright @2021 |